အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်အနေဖြင့် အသုံးချမှုပြင်ဆင်
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၉)။ "ယုန်"။ in စွယ်စုံကျမ်းစာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၁၁ (ပထမအကြိမ် ed.)။ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့။: စာပေဗိမာန်။
၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။